DEG-DEG Ayaa Loo Shaacin Doonaa - Willian Oo La Shaaciyey Go'aanka Uu Gaadhay & Kooxda Uu Ku Biirayo - Gool24.Net
DEG-DEG Ayaa Loo Shaacin Doonaa – Willian Oo La Shaaciyey Go’aanka Uu Gaadhay & Kooxda Uu Ku Biirayo
Wakiilka xiddiga reer Brazil ee Willian ayaa shaaciyey in wax kasta oo ku saabsan mustaqbalka laacibkan la dhamaystiray, isla markaana si degdeg ah loo shaacin doono kooxda uu ku biirayo.
Kia Joorabchian waxa uu diiday inuu si cad u sheego magaca kooxda wax walba ay la dhamaystireen ee uu Willian ku biirayo kaddib markii uu dhamaaday heshiiskii uu kula jiray Chelsea.
Laakiin waxa loo badinayaa inuu Arsenal kusii jeedo oo uu qalinka ugu duugay heshiis saddex sannadood ah, isla markaana uu tijaabada caafimaadka u maray.
32 jirkan reer Brazil ayaan oo hal abuurkiisa kubbadeed uu soo jiitay kooxo badan oo dunida ah, waxa uu Kia Joorabchian ka gaabsaday inuu magacaabo kooxda uu ku biirayo, waxaanu yidhi: “Waa ciyaartoy xor ah. Toddoba sannadood oo cajiib ah oo uu joogay Chelsea, kana soo hoos ciyaaray tababareyaal kala duwan, waxa uu kusoo guuleystay koobab kala duwan iyadoo uu xidhiidh heersare ahna la lahaa Frank Lampard oo uu wax badan ka rajaynayay.
“Laakiin, waxay ila tahay in wareeggaas laga gudbay oo aanu gaadhnay marxalad wanaagsan oo aanu hore u socono. Waqtigan, ma sheegi karayo meel uu tegayo, waxaase hubaal ah in Arsenal ka mid tahay kooxaha doonaya.”
Intaas kaddib waxa uu Kia Joorabchian shaaciyey in si degdeg ah ay u shaacin doonaan kooxda uu ku biirayo, waxaanu yidhi: “Waqti badan innagama xigo marka aanu shaacinayno. Waanu ognahay halka uu tagayo, markaa ma dheera waqtigu.”